Baadhayaal Sheegay In Laga Quustay Diyaarad La Waayey 2014-kii
Maleysia (Dhamays) – Baadhayaal u dhashay dalka Australia oo ku hawlanaa sidii loo heli lahaa Diyaaraddii MH370 ee Maleysia laga lahaa ee la waayay sanadkii 2014-kii ayaa war kasoo saaray baadhitaankooda.
Duulimaadkan oo u kala gooshayay magaalooyinka Beijin ee shiinaha iyo Kuala Lumbur ee Maleysia, isla-markaana ay saarnaayeen 239 rakaab ah ayaa la waayay meel ay ka martay.
Baadi-goobkan oo ay sidoo kale ku hawlanaayeen dalalka Shiinaha iyo Malaysia ayaa waxaa si rasmi ah loosoo afjaray bishii January ee sanadkan kadib markii lagu hawlanaa 1,046 maalmood.
Kooxda reer Australia ayaa sheegay in ay tahay wax maskaxdooda ka weyn, isla-markaasina aanu bini’aadamka qiyaasan karin in diyaaradda la waayay wax xitaa raadkeeda ah.
“Waa wax aanu maanka qiyaasan karin, isla-markaana aanan la aqbali karin in taariikhda casriga ah ee duulimaadyada oo maalin kasta ay hawada isticmaalaan 10 milyan oo qof, in la waayo diyaarad sidaas u weyn, qofna aanu sheegi karin halka ay ku dhibicday” ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo lasoo saaray.
Warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay in inkasta oo loo galay dedaal aan xad lahayn baadigoobka diyaaraddan, in haddana la waayay meel lagu sheego. Balse, warbixinta ayaa lagu sheegay in markii dad ugu war dambaysay diyaaradda lagu xaqiijiyay meel 25,000 km u jirta dhanka waqooyi badweynta Hindiya, gaar ahaan halkii laga baadi goobay.
Diyaaradda ayaa xitaa laga baadi goobay gunta hoose ee badda, waana baadhitaankii ugu weynaa oo la sameeyay inta la xusuusan yahay taariikhda duulimaadyada Adduunka.
Janbiyo loo maleynayo in ay kasoo fuqeen diyaaradda ayaa ku soo caariyay meelo ka mid ah jasiirado ku yaala badweynta Hindiya iyo xeebaha bariga Afrika.
Meeshan ay baadhayaasha ku tilmaameen diyaaradda in ay ku dambaysay ayaa waxaa lagu saleeyay qiyaas laga qaatay dhinaca ay walxaha u daad-raacaan iyo waliba xog laga helay dayax-gacmeedyada hawada sare wax ka sawira.
Dowladda Australia waxa ay sheegtay in ay baadhitaanka dib u bilaabayso oo kaliya haddii la helo caddeymo rasmi ah.
Dowladda Maleysia ayaa iyada wadda baadhitaan la xidhiidha sababta keentay in diyaaradda la waayo.
Arrinta ayaa waxa ay noqotay mucjisadii ugu weyneyd Adduunka, waxaana illaa hadda lala yaabanyahay halka ay ku dhibicday diyaaradda iyo rakaabkeedii.
Previous: Madaxweynaha Oo La Kulmay Wefti Ka Socday Dalalka Somaliland Ka Taageera Doorashooyinka
Next: Saddex Carruur Ah Oo Ku Dhintay Dab Ka Kacay Gurigooda Oo Hargeysa Ku Yaalla